The Irrawaddy's Blog: Just Do It
စစ်အစိုးရကို ဖေ့စ်ဘုတ် လှုပ်ရှားမှုကနေ ဖြုတ်ချမယ်လို့ ပြောရင် အခုအချိန်မှာ ဒါဟာ “ဟာသ” တခုလို့ ဘယ်သူမှ သဘောထားမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တူနီးရှားမှာ အာဏာရှင်ပြုတ်ကျသွားတာ ဆိုရှယ်နက်ခ်ဝပ်တခုကနေ ကီးဘုတ်နဲ့ စလိုက်လို့ပါ။ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ ဒိုမီနိုသဘောတရားအတိုင်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ အာဏာရှင်ကို အန်တုတဲ့ ပွဲတွေ ပေါ်လာတာ အခုလတ်တလေ လစ်ဗျားအထိပါပဲ။
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ကဒါဖီဆိုရင် မာရသွန်ရှည်လျားတဲ့ တောင်စဉ်ရေမရ မိန့်ခွန်းတွေ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိပြော၊ နောက်ဆုံး အိုစမာဘင်လာဒင်ကိုပါ ဆွဲရတဲ့ အထိတောင် အခြေအနေက ဆိုးနေပါပြီ။
မြန်မာလူငယ်တွေကလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ Just Do It ဆိုပြီး လှုပ်ရှားပါမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်ကနေ စာမျက်နှာ စဖွင့်လိုက်တယ်လို့ သူတို့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ (Just Do It against Military Dictatorship) အင်ဖိုမှာ တွေ့ရပါတယ်။
Just Do It ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ မြန်မာပြည်က ဖိနှိပ်မှုသတင်းတွေ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“တို့ အထဲ က လူငယ် တွေ ဆို အတိုကောက် JD လို့ ခေါ်ရင် ရတယ်။”
“Just Do It ဆိုတာ ဘယ်သူတွေ လဲ ......Just Do It ဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ”
“စစ်အာဏာရှင် စနစ် လက်အောက်ကလွတ်အောင် ငါ တို့ အချိန် အများကြီး ဆွဲနေလို့ မရတော့ဘူး။ ငါတို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေဟာ နောင်ကျရင် ငါတို့ရဲ့အသုံးမကျမှုတွေကို အပြစ်တင်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် အခုပဲ စကြစို့”
“စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုံဆော် စာများ မြေနီကုန်း ဒဂုံ စင်တာတွင် လိုက်လံကပ် (ဒါငါတို့ ရဲ့ ပထမ ဆုံးလုပ်နိုင်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နာရီလောက်က ဒဂုံ စင်တာ မှာ ကပ်ခဲ့တာ စာသားက တစ်ကြောင်းတည်း (စစ်အာဏာရှင် စနစ် ကို တော်လှန် ဖို့အချိန် တန်ပြီ) တဲ့ ဓာတ်လှေကား အတက်နဲ့ ဝင်ပေါက်တွေ မှာ ကပ်ထားတယ် ။ ၁၅ စောင်လောက် ရှိမယ်။”
“အခု သန်းရွှေ GET OUT ပိုစတာ ထုတ်ပြီးသွားပြီ ရန်ကုန်၊မန္တလေး နဲ့ပဲခူးတွေ မှာ လိုက်ကပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။”
ဒါတွေကတော့ Just Do It စာမျက်နှာက စာသားတွေပါ။ စိတ်ဝင်စားသူများ ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲမှာ Just Do It against Military Dictatorship လို့ ရိုက်ရှာရင် အဲဒီကွန်ရက်ကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Harmlock said... :
ဘာလို့ notification တွေတွေ့နေရတာလဲ?
အရည်မရ အဖတ်မရတွေလုပ်ပြန်ပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်သုံးတာ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလဲ။ 0.000၂ % လား။
first step is very important for us ! let's do it now and go ahead it .
We all are encourages you and for all.
yar said... :
noti တွေတွေ့ရတာ ရှင်းပါတယ်.. သတင်းရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတာ မို့လို့ပေါ့... ဒါကြောင့်လဲ သူ့ပေ့ခ်ျကို သာသာထိုးထိုးရေးထားတာပေါ့... မြန်မာပြည်မှာတော့ ယခုအချိန်မှာ FB ကတော်လှန်ရေး လုံးဝမစနိုင်ပါဘူး.. အရှေ့အလည်ပိုင်း တောလှန်ရေးတွေမှလည်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့အခါ FB ထက် မိုဘိုင်းနဲ့ တွစ်လုပ်နိုင်တဲ့ Twitter ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပိုပြီး အရေးပါပါတယ် ... ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာတော့ အရည်မရမဖတ်မရ ခါတော်မီတွေ မလုပ်ပါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျက်စီးနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ နောက်ပြီး ရိုးသားမှုရှိပါ။ ကိုယ့် Page ကို သတင်းပြန်ရေးတာ မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်ရင်တောင်ပေါ်တင်လုပ်ပါ။
ခင်ဗျား တို့ ကလည်းဗျာ အင်တာနက် Experience တို့ Facebook Experience တို့ ဘယ်လောက်ညံ့လဲ ဆိုတာ ချာတူးကိုလန်နေတာ ပဲ ။ Noti တွေ ကာ စာရေးသူ ဒါမှ မဟုတ် သူ့ ပရင့် စခရင်း ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါ သူမူလ ပေ့ မှာ ရှိတဲ့ Noti ပေါ့ ။ မယုံရင် ခင်ဗျား တို့ လည်း JUST DO IT ကို ခင်ဗျား တို့ ဆီမှာ Noti ရှိတဲ့ အချိန် ဖွင့်ထားပြီး လုပ်ပါလား ။ဘယ်လို မြန်မာ
တွေ လဲ မသိဘူး။ ကားပေါ်စ တုန်းက တောသား တွေ ပြောသလို ဖြစ်နေပြီ။
It is true that we will JUST DO IT.
But How will we achieve our goal?
What is OUR STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES AND THREATS?
What is SPDC Strength, Weaknesses and Opportunies and Threats?
How will we dominance their weakness and how will we weaken their strength? We must also know how to take the opportunities on the situations. How will we eliminate the threats?
Form4Groups
1. Intelligence ( Counter intelligence to SPDC)
2. Communication Group ( Real time Radio and Petrol the Towns)
3. SPDC's Intelligence Disturbance Group ( Take Down the SPDC's Intelligence such as yayaka, kyant phut, steet informers and etc..)
4. Revolution Defance Group ( Protect the people and defend and retain the momemtum of the revolution.
We will win ( People are with us) Just Do our parts.
SPDC has resources of one million people at most
We have more than fifty millons resources. We can counter balance the power and eliminate them.. Bullet is not the power. Power is the intelligence...
What they did was they scared with the bullet first and use the intelligence to crush the revolution.
If we could crush the intelligence before they scare us with the bullet. Bullet will not know where to fly.
During the revolution, make citizen arrest to street gangs ,informers and yayaka and so on.